Hiran State - News: Maxaa ka jira in Shiikh Shariif beesha caalamka kul ataliyey in aan lagu deg degin go,aankii ay mudanayaashu ay xilka kak qadeen Shariif Hasan?
Maxaa ka jira in Shiikh Shariif beesha caalamka kul ataliyey in aan lagu deg degin go,aankii ay mudanayaashu ay xilka kak qadeen Shariif Hasan?
HS:-Maxaa ka jira in Shiikh Shariif beesha caalamka kula taliyey in aan lagu deg degin go,aankii ay mudanayaashu ay xilka kaka qadeen Shariif Hasan?
Marka aad dib u eegto siyaasada ka socota Mogdisho waxaa ku dhacay Shariif Hasan waxii ay reer Sh/dhexe dhihi jireen Odey Geedi goobta Geey gadaalna aaga soo gadoon, kadib markii saaxiibkiis Shiikh Shariif beesha calaamka kula taliyey in aan la faragelin amaba lagu deg degin go,aankii ay mudanayaashu xilka kaka qaadeen Shariif Hasan taasi oo meesha ka saareysa rajadii uu Shariif Hasan ka qabay inuu sii noqdo gudoomiye baarlamaan.
Shiikh Shariif ayaa lagu soo waramayaa inuusan dooneyn inuu iska lumiyo fursadaan waayo Shariif Hasan waa ninka kaliya ee gursigaas ku heysta Shiikh Shariif marka laga hadlayo masuuliyiinta TFGda ku jirta maadama uu ka mid yahay musharaxiinta u tartameysa jagada madaxweynanimada Somaliya waxii ka danbeeya sanadka cusub. warar lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in Shariif Hasan meesha ay dhibaatada ka heysato ay tahay hogaanka sare oo la shqeynayo mudanayaasha baarlamaanka ee xilka ka qaday Shariifka maadama uu horey u sameystay colaad hore ee uu Shariif Sakiin wax sumcad ah uusan sii diyaarsan mudadii lagu jiray fowdada oo uu qofkasta handadi jiray.
Shariif Hasan oo ay ku jirto naf dhici weysay ayaa hada gurmad ka sugaya Amb Mahiga oo ah ninka ay ka godo talada iyo go,aanka ugu danbeeya ee mustaqbalka Somaliya maadama uu warbixinada ugu badan ka heli jiray Shariif Hasan oo la sheego inuu wakiil uga ahaa Somaliya dowlado badan si uu u siiyo sirta iyo waxiiba talo ah ee dalka lagu maamulo.
Waxaa kale oo taasi ka sii daran in ay kalsooni aad u weyn ka muuqato mudanayasha xilka ka qaaday Shariif Hasan kadib markii lagu dhiiran waayey in la kala fur furo taasi oo Shariif Hasan ku qasabtay inuu meelba mar u cararo. Shariif Hasan ayaa ku jira marxaladii uu abwaanka Somaliyeed lahaa ciilow Ba'eey ceebteyda arag Casaaanyada sideedii miyaan ceyn walba u cararay.
Laakinse maxaa dhici kara hadii Shiikh Shariif uu mowqifkiisa bedelo oo uu isku dayo inu soo celiyo Shariif Hasan?
Dadka siyaasada Somaliya qiimeeya waxey leeyahiin Shiikh Shariif hadii uu doonayo inuu siyaasada kusii jiro waxuu heystaa fursad uu Shariif Hasan meesha uga saari karo si ay waji kale u yeelato siyaasada Somaliya maadama shacabka Somaliyeed u arkaan siyaasada Shariif Hasan mid qariban oo aan lagu gaareyn wax haba yaraaatee horumar ah.
Ugu danbeyn hadii baa la leeyahay shirka Garoowe baaqdo Shariif Hasana meesha ka baxo Shiikh Shariif waa siyaasi aan la dheyelsan karin shirka London lagu qabanayane isagoo siweyn loo ixtiraamayo ayuu dhici doonaa hadiise uu intaas ku guul dareysto isagaa loo yaabaa maadama ujeedada shirka Garoowe laga leeyahay ay tahay in la dhimo tirada mudanayasha baarlamaanka si looga soo reebo tiro yar oo Shariif Hasan ka amar qaata.
Hadaba bal eeg qodobadii ugu danbeyey ee ayisku raaceen hogaanka sare siiba R/wasaaraha iyo madaxweyne Shariif.
Madaxda Dowladda Soomaaliyeed ayagoo tixgelinaya marxaladda dalku marayo,
xaaladda siyaasadeed iyo mida amni. Waxay wadatashi la sameeyeen qaar ka mid
ah xubnaha Baarlamanka iyo Beesha caalamka ayagoo tixgelinaya;
a) Axdi KMG ah ee Soomaliyeed oo saldhig u ah shuruucda dalka
b) Heshiiskii Kampala (Kampala Accord) iyo
c) Taabagelinta Roadmap-ka
Kadib, markii shaki laga muujiyey:
Qaabkii loo maray kulminta Baarlamanka iyo
Tirada u codaysay motion-ka
Sidaas awgeed, Madaxda Qaranka Soomaaliyeed ayagoo ixtiraamaya madaxbanaanida
Baarlamanka waxay soo jeedinayaan:
a) In Baarlamanku Shaqeeyo bilaabana kulamdiisa joogtda ahaa si ay u gutaan waajibaadkooda Dastuuriga ah
b) In la tixgeliyo Marxaladda xasaasiga ah Dalku marayo
c) In la raaco sharuucda Baarlamanka iyo xeer hoosaadyada
d) In la dhowro heshiikii Kampala (Kampala Accord)
e) In la dhowro Axdiga KMG ah ee Soomaaliyeed
Halkaas waxaa ka cad in Shariif Hasan Galbaday xaalkiisuna marayo heer aan caadi aheyn maadaama aan qalad lagu tilmaamin go,aankii ay mudanayashuka gaareen Shariif Sakiin.
La soco wararkeena caawa iyo xaalada siyaasada Somaliya.
· admin on December 18 2011 13:07:24 · 0 Comments · 1805 Reads ·
14,585,780 unique visits